Ogaden News Agency (ONA) – Shir kadhacay Geneva oo ay qaramada midobey ku dhageysaneyso xaalada Somaliya
Shir kadhacay Geneva oo ay qaramada midobey ku dhageysaneyso xaalada Somaliya
Posted by wariye5	/ May 2, 2011
Waxaa maanta ka furmay xarunta Qaramada Midoobay (QM) ee Geneva shir Jamhuuriyada Soomaaliya lagaga dhageeysanayo guud ahaan xaalada dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin dhinac walbaba. Shirkan oo lagu magacaabo Universal Periodic Review ayeey Jamhuuriyada Soomaaliya qoraalo soo gudbisay soona dirtay wafdi heer sare ah. Sidoo kale dowlada iyo heeyadaha aan dowliga ahayn ayaa iyagina gudbiyay qoraalo guud iyo kuwa gaar ahaaneed oo ku saabsan waxa Soomaaliya ka dhacaya, cida masuulka ka ah iyo dalabyo in qeeybaha kala duwan ee Soomaaliya dhowraan shuruucda caalamiga ah.
African Rights Monitor (ARM) ayaa ka mid ah heeyadaha aan dowliga ahayn ee gudbiyay qoraalo si gaar ah u taabanaya dhibaatooyinka gobolada Soomaaliya qaarkood loogu geeysto dadka shacabka ah ee ka soo cararaya dhibaatada itoobiya ka wado Ogaadeenya. Masuuliyiin sare oo ka socda ARM ayaa ku sugan xarunta QM ee Geneva halkaa oo aay kula kulmayaan masuuliyiinta matalaya wadamada qaarkood.
Warbixinta ARM gudbisay ayeey ku xustay in shacab fara badan oo Soomaaliyeed si ula kac ah loogu xasuuqay Soomaaliya gaar ahaan markii ciidamada itoobiya wadanka galeen. Dowladii C/llaahi Yuusuf, maamulada Garoowe iyo Hargeeysa ayaa iyaguna si ula kac ah u dilay ama u gacan galiyay itoobiya dad shacab ah oo ka soo cararay xasuuqa dowlada itoobiya ka wado Ogaadeenya taas oo ka soo horjeeda shuruucda caalamiga ah ee mamnuucaya ku xadgudubka xuquuqka aadanaha. Soomaaliya ayaanay ka jirin dowlad awood u leh hanashada dalkeeda laakiin taasi kama hor istaageeyso in la dhoowro xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed.
African Rights Monitor ayaa dadaal ugu jirta sidii loo ciqaabi lahaa kuwa ka masuulka dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa Ogaadeenyaba loogu geeysto Bariga Afrika.
waan ku faraxsanahay sida xaqiiqda ah ee loo soo gudbiyey warbixinta lagu cadaynaayo xasuuqa ummadda heer ogadenia iyo somaliyaba waana in loo aar gooyaa umadaas laxasuuqay
mashaa alahaa halkiinaa kasiiwada dhalinyarooy watan ubahanay in aan isqaybinee dadaala gulaysta xaqeenu maqarsomayee ucadeeya calmaka xaqeeniiye ucadeya caalamka sidii aad ugu cadayn jirteenba
waa si fiican,
Soomaaliya way hagaagi hubaashii waa sidaa
Itoobiya way kala yaaci yaqiintii waa sidaa